Qalabyada warshadaha - miisaska bilowga, Wadashaqeynta ama xafiiska sinta (10 saamiga ku jira) - Warshadda Wanaagsan ee Stuff
Tikidhada baqtinta oo waaweyn
Miisaska / miisaska
Su'aalaha / ku saabsan
Home / Miisaska / Ka hortagga warshadaha - miisaska bilowga, Wadashaqeynta ama xafiiska sinta (10 keydka)
Ka hortagga warshadaha - miisaska bilowga, Wadashaqeynta ama xafiiska sinta (10 keydka)
Ka dibna ... waxaad la kulantay miisasyo aad u cajiib badan. Toddobaad kasta waxaan iibinnaa kuraas iyo miisasaska meelaha wada shaqeynta, bilowga iyo xafiisyada casriga.
Quruxdaani waxay sugayaan inay 'iftiimiyaan' gudaha warshadaha. Qaab-dhismeedkooda sahlan oo ay weheliso shaqaaluhu si cad oo xaadir ah oo looga baahan yahay isu-imaatinku waxay ka dhigayaan waxyaalahan dhabta ah. Waxaan rajeyneynaa inay wada joogi karaan sababtoo ah isku xirnaanta miisaskaas gaarka ah waxay siiyeen khasnado dheeri ah.
Kaalay oo arag jacaylka!
MADAXWEYNAHA: Alaabada margin
€ 75 miiskiiba
Waxaad ku diri kartaa gaadiidkeena gaarka ah € 1Km safarka wareega wareega PC 2520. Waxa kale oo aad ku soo diri kartaa boorso. Biljamka gudaheeda € 75 iyo Yurub dhexdeeda € 125 ilaa € 200. Dhamaan miisaska waxay kuxiran yihiin hal baaldi. Kasoo qaadida bakhaarka bakhaarka ayaa dabcan sidoo kale macquul ah.
Waxaan sidoo kale aqbalnaa ECO-CHECKS (warqad iyo digital)!
qaybood: Canug yar, Miisaska Tag: xafiiska
bar barista bistro wakiilka xafiiska Cafestoelen kafeega design eromes Factory foomka Galvanitas talin weyn hoteelada warshadaha Antiques Industrial warshadaha kanteen kursi fadhi kuraasta makhaayadda saxaro qoryaha Loft Marko qoryo adag Pagholz Dambe pop-up barkin-pop-up makhaayad Retro kursiga iskuulka kuraasta dugsiga Sanduuqyada tufo miiska miisaska Terrace Thur-on-Seat Tubax shirarka shirarka guridda Naqshadaynta canugga goobta shaqada midab madow
Cuntada topper! Galvanitas S22 - 15 ayaa la hayaa € 100,00
Shayga u gaarka ah - Miiska Formica - 1 ayaa la heli karaa € 75,00
Kuraas baaldiyo ah oo Pagholz ah (12 saamiga ku jira) € 45,00
10 deji oo Galvanitas S22 ah oo la dayactiray oo laga keenay 70-meeyadii (qiimaha go'an 10 gogo ') € 1000,00 € 850,00
Kursiyo waaweyn oo Norwey ah oo waaweyn
Galvanitas S16 retro topper! gabal gabadii € 121,00
banki ka soo baxa xarunta iskuulka
Miiska dhinaceeda / miisaska shaybaarka € 40,00
Kho Liang Le - Naqshadeynta Nederlaanka - kuwa ugu sarreeya Warshadaha € 50,00
Cuntada topper! Galvanitas S22 - 30 ayaa la hayaa € 121,00
Aaladda Wanaagsan ee Ganacsiga - Yuri Hullak
At The Factory Good Goodyadda waxaad ka iibsan kartaa canjeerada iyo qalabka warshadaha laga bilaabo sanadka '50,' 60, '70 iyo' 80. Waxaanu bixinaa 'Fursadaha' ama fursadaha loogu talagalay gudaha dibadiisa ku yaal dukaanka HORECA, goobta shaqada ama guriga.
Eeg waxa aan horay u iibinay:
Waxyaabaha iibka ah
Cateringka iyo ganacsiyada
Wixii warshadaha cateriga ah iyo shirkadaha waxaan leenahay kooxo waaweyn oo ah kuraasta beeraha ee stock. Xajiyadayadu waxay ku taallaa gobolka Antwerp oo ka baxsan E313, E19 iyo E34.
Tarjumaad / Maqalka / Turjubaanka
Warshadda Stuff wanaagsan | Shuruudaha iyo xaaladaha | Waxaa sameeyay Cowality